TGC 15 taona: taratry ny ho avy ny seho omaly | NewsMada
TGC 15 taona: taratry ny ho avy ny seho omaly
Lalan-davitra ny efa nizorana. Tranga maro ny efa niainana… Nahatratra ny faha-15 taona niorenany ny Tana Gospel Choir na ny TGC. Natomboka sy nosokafa, omaly tetsy amin’ny Tranompokonolona Analakely, ny hetsika rehetra hotontosaina mandritra ity taona ity. Tazana avy hatrany fa taratry ny ho avy ho an’ny TGC sy ny hetsika manaraka mbola hotontosain-dry zareo ity seho omaly ity. Anisan’izany ny hafanam-po sy ny fahaiza-miaraka amin’ny fampitan-kafatra avy amin’ny alalan’ny gospel. Feo kanto sy matanjaka, maneho fahavononana!
Raha ny fandaharam-potoana efa novolavolaina ao anatin’izao jobily fankalazana ny faha-15 taona izao, hisy ny seho goavana hotontosaina ao amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Imahamasina, ny 9 jona ho avy izao. Ao ihany koa ny famoahana rakikira “best of”, hirakitra ireo hira nanamarika indrindra izay 15 taona niderana ny halehiben’ny voninahitr’Andriamanitra izay. Ankoatra ireo, hanatanteraka fitetezam-paritra eto an-toerana ry zareo sady manana fikasana hivoaka any ivelan’ny Nosy ihany koa.
Tsetsatsetsa tsy aritra ny ilazana fa ny Tranompokonolona Analakely no nanatontosan’ny TGC seho an-tsehatra voalohany tany amin’ny 15 taona lasa. Izay no nahatonga azy ireo nisafidy ity toerana ity hanokafana ny hetsika rehetra ao anatin’izao fankalazana izao.